खुर्सानीबाट दीर्घजीवन पाइन्छ । - Himalayan Kangaroo
खुर्सानीबाट दीर्घजीवन पाइन्छ ।
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ भाद्र २०७२, मंगलवार ०६:०६ |
काठमाडौं । तपाई पीरो खान रुचाउँनुहुन्छ ? त्यसो हो भने खुशी मान्नुहोस् । किनकि तपाई दीर्घायु जीवन जीउँदै हुनुहुन्छ । अर्थात पीरो खानेकुराले दीर्घायु हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । चीनमा गरिएको एक शोध अध्ययनले खानामा खुर्सानीयुक्त मसला प्रयोग गर्नाले आयु बढ्ने गर्दछ । यसका लागि विशेषज्ञहरुले ३० देखि ७९ वर्ष उमेर समूहका करिब पाँच लाख चीनियाँ नागरिकहरुमाथि यस्तो अध्धयन गरिएको थियो । अध्ययनको निष्कर्षमा खुर्सानीको सेवनले शरीरमा बढेको अनावश्यक बोसो घटेको पाइएको थियो । यसले मोटोपन,मधुमेह र हृदयघातमा समेत कमी आएको पाइएको थियो ।
पित्त रोगबाट छुटकरा मिल्छ :
आयुर्वेद विशेषज्ञहरुका अनुसार नियमित खुर्सानी सेवनले शरीरमा गर्मी बढाउँन र पित्तलाई सन्तुलित बनाउँन मद्दत गर्दछ । तर यसको मात्रा व्यक्तिको दैनिक आदत वा शरीरको प्रकृति अनुसार निर्भर गर्दछ । जो व्यक्ति नियमित रुपमा खुर्सानी सेवन गर्दछन् उनीहरुलाई खुर्सानीले खासै असर गर्दैन । तर जो नियमित रुपमा खुर्सानी खाँदैनन्,उनीहरुलाई भने कहिलेकाही खाने पीरोले पेट पोल्ने र अल्सर हुनुको साथै कलेजोमा समेत असर गर्न सक्दछ । त्यस्ता व्यक्तिहरुले खुर्सानी सेवन गर्ने समयमा दही,कागती वा घ्यू खाए असर कम गर्छ ।
सीमित मात्रामा खान लेना जरूरी :
आयुर्वेद चिकित्सक डा एस. एस. शर्माका अनुसार केही व्यक्तिहरुमा खुर्सानी सेवनबाट पेट सम्बन्ध िसमस्याहरु हुन्छन् भन्ने भ्रम छ । यस्तो समस्या त्यस्ता व्यक्तिहरुमा मात्र देखिन सक्छन् जो खाँदा धेरै पीरो खाने र नखाँदा खाँदै नखाने स्वभावका हुन्छन् । सादा खाना खाने बानी परेकाहरुले अचानक पीरो धेरे खाँदा उनीहरुलाई एसिडिटी अथवा पेट पोल्ने समस्याले पिरोल्न सक्छ । त्यसैले खानामा नियमित रुपमा अलि अलि पिरो सेवन गर्नु लाभदायक मानिन्छ । यसबाट पाचन शक्ति बढ्नुको साथै अल्सरलाई न्यून गर्न पनि मद्दत पुग्छ । तर खुर्सानुयुक्त खानापछि पानी वा अन्य पेय पदार्थ सेवन गर्न पनि आवश्यक छ ।
Previousराष्ट्रिय लिगमा आज एपीएफ र थ्रिस्टार भिड्ने
Nextपशुपतिमा तीजका लागि सबै तयारी पूरा
यसरि बनाउन सकिन्छ स्वादिष्ट पालक पनिर ( भिडियो )
२० असार २०७५, बुधबार ०८:०८
यसरि बनाउन सकिन्छ स्वादिष्ट तीजको दर : पुलाउ, छोले मसला, मासु, अचार र खीर ( भिडियो)
१४ भाद्र २०७५, बिहीबार ०९:२६
माघेसंक्रान्ति विशेष परिकार चाकुको ऐतिहासिक कथा
२९ पुष २०७४, शनिबार ०७:५५
खसीको साँधेको मासु बनाउने तरिका ( भिडियो )
१७ पुष २०७५, मंगलवार ०९:२२